Rivodoza Alcide : Mihena hatrany ny heriny -
AccueilSongandinaRivodoza Alcide : Mihena hatrany ny heriny
Rivodoza Alcide : Mihena hatrany ny heriny
Mihena hatrany ny herin’ny rivodoza Alcide ary hitohy hatrany izany, ka hiverina ho « cyclone tropical » araka ny vaovao voaray avy teny amin’ny sampana mpamantatra ny toetra ny andro. Tany amin’ny 320 Km Avaratra Atsinanan’ny Vohemar no nisy ny foiben’i Alcide, omaly tamin’ny 7 ora hariva. Mitondra rivotra mahatratra 150 km isan’ora sy tafiotra 210 km isan’ora izy manodidina ny foibeny ary mizotra miankadrefana somary Atsimo Andrefana amin’ny hafainganam-pandeha 10 hatramin’ny 13 km isan’ora.
Tombanana hihena hatrany ny heriny ao anatin’ny roa andro ho avy. “Vinavinaina hiova zotra anio alina (omaly alina). Somary mianatsimo ary mitamberindia hianavaratra izy ho an’ny ampitso (androany). Izany hoe, mianatsimo, ary miverina mianavaratra manalavitra an’i Madagasikara i Alcide”, hoy ny fanazavana azo hatrany. Noho izany, tsy misy filazana loza mikasika ity rivodoza ity eto amin’ny Nosintsika satria tsy hakasika an’i Madagasikara izy raha ny vinavina. “Na izany aza anefa, mila mitandrina ny mpampiasa ranomasina amin’ny morontsiraka faritra Sava sy Diana. Hisy alondrano mety hihoatra ny 2,5 metatra anio alina (omaly alina)”, raha ny fanamarihana ny sampana mpamanatatra ny toetra ny andro hatrany.
Fantatra izao fa hiazo an’i Vatican ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hanatrika ny fametrahana amin’ ny fomba ofisialy ny marika maha kardinaly an’i Désiré Tsarahazana. Raha ny fantatra dia tsy ho ela no hanainga an-tanindrazana ny ...Tohiny